ခြံထဲက … | Layma's World
Filed under: Flower, Pieces |
« ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ နေ့ …. ခြံထဲက.. ( ဆုံး) »
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်, on February 21, 2009 at 12:21 am said:
ပန်းလေးတွေကို ဖတ်ရတာ ပန်းရနံ့လေးတွေ မွှေးလာသလိုပါပဲ..
ချစ်စဖွယ်အတွေးလေး.. အရေးလေးကို နှစ်သက်မိတယ်..
ဆက်ရန်လေးကို မျှော်နေပါတယ်..း)း)
ညိမ်းညို, on February 21, 2009 at 3:51 am said:
ဘာကြီးလဲလို့ တွေးနေတုန်း မှတ်ချက်ကိုရောက်လာလို့ ဘာကြီးမှ မတွေးလိုက်ရတော့ဘူးဗျ 😛
ဆက်ရန်ကို စောင့်မျှော်အားပေးလျက် 🙂
လွမ်းလုင်, on February 21, 2009 at 4:26 am said:
ပိတောက်က စီနီယာအကျဆုံး စံပယ်က ဂျူနီယာအကျဆုံး။ နောက်ထပ်ရော ဘယ်ပန်းတွေ တန်းစီ ဦးမယ်မသိ။ လောလောဆယ်တော့ ပန်းအငွေ့အသက်တွေ ရှူရှိုက်မိသလိုလိုပဲ။
sin dan lar, on February 21, 2009 at 10:44 am said:
SoeMoe, on February 21, 2009 at 10:47 am said:
စိတ်ဝင်စားအောင်ကိုရေးတတ်တယ်..ဆက်ရန်ကိုမျှော်နေမယ် မမ 😛
သားကြွက်, on February 21, 2009 at 11:18 am said:
ခြံထဲက ပန်းရနံ့တွေ လာရှူရှိုက်သွားပါတယ် 🙂
ကိုသားငယ်, on February 21, 2009 at 12:17 pm said:
စိတ်ကူးတွေ အရမ်းကောင်းတယ် ပန်းပင်လေးတွေနေရာ ချရင်းရလာတဲ့ စိတ်ကူးလား… ခြံထဲကို နောက်ထပ်လာပါဦးမယ် 😛
MhawSayar, on February 21, 2009 at 7:10 pm said:
ဆက်ပါဦးမည်ဆိုတော့. နောက်လာမယ့် အကြောင်းက ဒေါ်နှင်းဆီ တို့ အကြောင်းပဲ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် (မာနကြီးတယ်လို့ ပြောသံကြားဖူးသလိုပဲ အဲဒီ အဒေါ်က).
မိမြတ်လေး တို့ ဘာတို့ အကြောင်းလဲ လုပ်ပါဦးဗျ. စိတ်ဝင်စားလို့. 🙂
nu-san, on February 21, 2009 at 8:31 pm said:
လေးမက ရေးတတ်လိုက်တာ.. ပန်းပင်တွေ အကြောင်း နာမည်တွေပေးပြီး တဖွဲ့တနွဲ့ရေးထားတာ.. ဖတ်လို့ကောင်းတယ်.. ဆက်ရန်ကို မျှော်နေမယ် ညီမလေးရေ… 🙂
နေ့အိပ်မက်, on February 22, 2009 at 1:54 pm said:
နေ့အိပ်မက်က ပန်းတွေ အပင်တွေမကြိုက်ပေမယ့် မမအရေးအသားကောင်းလို့ ဖတ်ချင်နေပြီ… ဆက်ရေးထားတာမြန်မြန်တင်ပေးနော်… 🙂
ခြံထဲက.. ( ဆုံး), on February 22, 2009 at 9:29 pm said:
[…] ခြံထဲက … ( စ ) […]